ebike Catalog | fekitori yemagetsi bhasikoro | ebike Shuangye
musha Shuangye electric bicycle catalog
Shuangye inyanzvi vanogadzira motokari yemagetsi, magetsi emakomo mabhasikoro, kutakura magetsi emagetsi, ebike kits uye ebike mabheteri.
tine 10 yemakore mashizha ekugadzira uye kugadzirwa kwevanhu, nepamusoro pekugadzira mutsara, kunyatsogadzirisa masangano, magungano emusangano uye kuvandudza zvikwata zvekuongorora zvebike, kupa huvimbiso hunovimbiswa nehutano hwakanaka kune vatengi.
OEM nemirairo yeODM inotsigirwa musangano reShuangye. Vatengesi mibvunzo ichapindurwa mukati meawa 24, Shuangye Tsvakai kupa vhetera Kutendeseka kwehutano, mutengo wokukwikwidzana, mhinduro dzinokurumidza.
isu tiri munzvimbo yakakura yegungwa, Zhuhai.we iri pedyo neZhuhai, ndege ye1 kusvika Macao uye 2 maawa kuHongkong neShenzhen.
Pano iwe unogona kuwana mazita akawanda ezvinyorwa zvinobatsira. Zvose zvinowanikwa nyore nyore kutora kana kuverenga pa-line.
2020 yazvino Shuangye magetsi emagetsi bhasiketi
Fat Tire Tire Ebike
Kana uchida kuziva ruzivo rwakawanda, ndapota usununguka kutitumira kwatiri, Tichakupindura iwe nokukurumidza sezvinobvira.
Chii chinonzi simba batsira bhasikoro?
Nzira yekuziva sei iyo yakareba renji yemagetsi bhasikoro?
Shuangye tinosangana newe pa127 Canton Fair 2020
Kupeta ebikes: wedzera zvishoma kurerukirwa kune hwako hwakabatikana hupenyu
Nhoroondo yekuvandudza yemabhasikoro emagetsi
Nzira dzekuchengetedza dzemagetsi mota yemabhasikoro